Fifandraisan’ny Maorisy sy Madagasikara Hohamafisina hatrany ny ara-toekarena
Natao omaly tetsy amin’ny hotely Carlton ny fankalazana ny faha 50 taonan’ny fahaleovantenan’ny Maorisy sy ny faha-26 taonan’ny naha repoblika azy.
Anisan’ny noresahana tao ny momba ny fiaraha-miasan’ny firenena Maorisiana sy Malagasy. Ao ohatra ny fanamafisana ilay commission mixte izay hampivelatra bebe kokoa hatrany ny fiaraha-miasa ara-ekonomika sy ny sosialy.Ankoatr’izay ny fizarana traikefa amin’ny sehatra fizahan-tany izay miroborobo fatratra any Maorisy mba hanatsarana sy hampandrosoana io sehatra io eto Madagasikara. Arak’izany, hotohizana hatrany ary hampitomboina ny fiaraha-miasa amin’i Madagasikaara, hoy ny ambasadaoron’i Maorisy Goburdhun Datakarran. Raha tsiahivina, efa nisy fifanarahana 3 vita sonia tamin’ny 11 martsa 2016. Nisy ny fifanarahana fiaraha-miasa mahakasika ilay commission mixte, ao ihany koa ny taratasy fifanekena (mémorandum d’entente) ny amin’ilay fametrahana ny faritra ara-toekarena manokana (ZES) ary ny farany ilay fifanarahana fifandraisan’ny sampandraharaha fampandrosoana ny toekarena eto Madagasikara EDBM (Economic Development Board of Madagascar) sy ny Board Investment of Mauritius any Maorisy. Efa maro ny firenena mizara traikefa amin’ny sehatra maro samihafa tahaka ny ataon’ny Maorisy saingy tsy misy vokany mihitsy. Ny tsy fahaiza-manao sy ny tsy fandraisan’andraikitry ny mpitondra no antony tsy mahatafavoaka ny firenena Malagasy.